Duofold® Nchikota Packaging
Duofold ® Nchikota Packaging
Duofold agwakọta nke kacha mma àgwà doro anya, igbe-ọkwa plastic na paperboard na-emepụta a n'ezie pụrụ iche visual ngwugwu. Na ijikọta ndị a abụọ dissimilar substrates na-enye ohere maka ụfọdụ nnọọ pụrụ iche bughi aghụghọ, mgbe na-enye abụọ pụrụ iche visual, textural na tactile amụta.
Soft crease ® gbatara isiike film ike ga-eji ike multiple plastic igbe ogwe ma ọ bụ mee ka windo na kechie gburugburu multiple akara edoghi, ikwe ka ukwuu visibiliti na ot windowed paperboard katọn. Ihe bụ ihe ọzọ, na isiike film na-agbakwụnye ike n'ezi na ike, ikwe ọtụtụ ibu windo karịa bụ na o kwere omume iji fechaa window film.
Na maka ọbụna karị shelf mmetụta, ọ bụla Nchikota dechapụ, flexo na / ma ọ bụ silkscreen obibi, plus foil stamping na ndị ọzọ na decorating pụrụ iche utịp, nwere ike etinyere ma plastic ma ọ bụ paperboard ogwe, ma ọ bụ ha abụọ.